Samachar Batika || News from Nepal » अमेरिकामा के गर्दैछिन सुहाना ? (फोटो फिचर)
अमेरिकामा के गर्दैछिन सुहाना ? (फोटो फिचर)
काठमाडौं- अभिनेत्री सुहाना थापा अहिले अमेरिकामा रहेकी छिन् । उनी फिल्म निर्देशक समेत रहेकी आमा झरना थापा र बुबा सुनिल कुमार थापासँग त्यहाँ पुगेकी हुन् ।अमेरिकामा रहेकी सुहानाले आफ्ना त्यहाँको क्रियाकलाप सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गरेर गराउने गरेकी छन् ।
केहि दिन अघि आमा झरना र बुबा सुनिलको साथ भ’र्जिनियाको एउटा रेस्टुरेन्टमा डिनर गरिरहेको उनको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो ।पछिल्लो तस्बिर भने उनी हिउँमा रमाइरहेको सार्वजनिक भएको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरुमा हिमपात भइरहेको छ । त्यही मौकामा सुहानाले ती हिउँमै बसेर तस्बिर खिचाएकी हुन् । तस्बिर उनकी आमा झरनाले कुनै क्याप्सन बिना नै पोस्ट गरेकी छिन् । तस्विरमा सुहाना निकै खुशी देखिएकी छन् ।सुहाना पछिल्लो समय ‘ए मेरो हजुर ४’ मा अभिनयरत छिन् ।
फिल्ममा अभिनेता अनमोल केसी उनको जोडीको रुपमा रहेका छन् । झरना थापाको निर्देशन रहेको फिल्मको छायाँकन अन्तिम चरणामा पुगेको छ ।घुमघामका साथै फिल्मका एउटा गीतको समेत छायाँकनको उद्देश्यले सुहाना आमाबुबा सहित त्यहाँ पुगेकी हुन् ।
प्रकाशित मिति १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०३:१७